किसानको संरक्षण गर्नेगरी वैदेशिक लगानी आवश्यक छः मन्त्री अर्याल — Arthatantra.com
Arthatantra.com > कृषि > किसानको संरक्षण गर्नेगरी वैदेशिक लगानी आवश्यक छः मन्त्री अर्याल
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले साना किसानहरुको संरक्षण गर्नेगरी कृषिमा वैदेशिक लगानी ‘एफडिआई’ आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । खाद्यका लागि कृषि अभियानले ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘कृषि विकासका समसामायिक सवालहरू’ विषयक छलफल कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताउनुभएको हो ।
२०७७ चैत्र ९ गते १४:४६ मा प्रकाशित
आइपीओ बिक्री गर्न सर्वोत्तम सिमेन्टद्वारा कानून उल्लंघन, लगानीकर्तालाई यसरी झुक्यायो !
महिन्द्राको विग बोलेरो सँगै २ लाखको निःशुल्क दुर्घटनामा बिमा !
हिमालपारीको जिल्ला मनाङबाट आलु काठमाडौ आउन थाल्यो
थप आठ जनामा कोरोना पुष्टि
एक लाख ५९ हजार जनालाई भ्रष्टाचारको कारबाही